SONYO Oo Hargeysa Ka Furtay Shir Lagu Diyaarinayo Qorshe 5 Sanadood Ah Oo Lagu Horumariyo Dhallinyarada Somaliland | FooreNews
Home wararka SONYO Oo Hargeysa Ka Furtay Shir Lagu Diyaarinayo Qorshe 5 Sanadood Ah Oo Lagu Horumariyo Dhallinyarada Somaliland
SONYO Oo Hargeysa Ka Furtay Shir Lagu Diyaarinayo Qorshe 5 Sanadood Ah Oo Lagu Horumariyo Dhallinyarada Somaliland
Hargeysa (Foore)- Wasiirka wasaaradda dhallinyarada Somaliland ee SONYO Md. Cabdi Siciid Faahiye ayaa maanta shir qorsheed muddo afar maalmood socon doona dalladda ururada dhallinyarada Somaliland ee SONYO uga furay Huteel Ambassador ee magaalada Hargeysa.
Shirkan oo dalladda SONYO ku diyaarinayso qorshe hawleedkii shanta sano ee soo socda lagu horumarin lahaa guud ahaan dhallinyarada Somaliland ee SONYO ayaa waxa ka qayb qaadanaya in ka badan 50 xubnood oo ka kala socda dhammaanba gobolada Somaliland Min Saylac ilaa Ceelaayo. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, hay’adaha SONSAF, Terrisolidali, Progression iyo shirkadda isgaadhsiinta ee SOMTEL.
Ugu horrayn agaasimaha fulinta dalladda ururada dhallinyarada Somaliland ee SONYO Md. Siciid Maxamed Axmed ayaa oo xafladda furitaanka shir hawleedkan ka hadlay ayaa xusay qiimaha ay xafiis ahaan u leedahay in ay soo diyaariyaan barnaamij qorsheed oo shanta sano ee soo socda lagu hawl gali doono oo ku aadan horumarinta dhallinyarada Somaliland. “Hawl qorsheysan oo aad wax ku qabataa waxa ay ka muhiimsan tahay in aad shaqo badan qabato adiga oo aan qorshaheedii oo cad lahayn. Waxa sharaf noo ah in aanu halkan ku diyaarino qorshihii aanu ku hawl gali lahayn shanta sano ee soo socota iyada oo khubaro aqoonyahno ah oo reer Somaliland ahi inaga caawin doonaan oo ay aqoon is waydaarsigan qayb ka noqon doonaan”. Ayuu yidhi Agaasimaha SONYO.
Guddoomiyaha dalladda ururada dhallinyarada Somaliland ee SONYO Md. Axmed Cabdi Wacays oo furitaantii shirkan kalmado kooban ka soo jeediyay ayaa xusay baahida keentay in SONYO diyaariso qorshe shan sanadood ah oo lagu daraaseeyo qorshaynta hawl galkii shantaa sanadood wixii lagu horumarin lahaa guud ahaan dhallinyarada Somaliland. Guddoomiye Wacays waxa uu ku dheeraaday qiimaha uu qorshahani ugu fadhiyo dhallinyarada si loo sameeyo wax qabad ku dhisan aqoon iyo daraaasado cilmiyaysan. Waxaanu mahad naq ballaadhan u soo jeediyay wasaaradda dhallinyarada, ciyaaraha iyo dhaqanka oo si hagar la’aanah isu barbar taagtay SONYO oo ay leeyihiin ujeeddo mid ah, sidoo kale waxa uu u mahad naqay masuuliyiintii kala dambeeyey ee SONYO soo maray oo hore u soo sameeyey qorshayaal laba ah oo ka koobnaa laba sano iyo saddex sano ah.
Ugu dambayn guddoomiye wacays waxa uu u mahad naqay 50-ka xubnood ee dhallinayarada ah ee isaga kala yimid dhammaanba gobolada Somaliland ee qorshe hawleedkan u yimid Hargeysa.
Wasiirka wasaaradda dhallinyarada, ciyaaraha iyo dhaqanka Somaliland Md. Cabdi Siciid Faahiye oo shir hawleedkan si rasmi ah u furay ayaa xusay qiimaha uu shirkani u leeyahay horumarinta dhallinyarada Somaliland waxaanu SONYO ku ammaanay hir gelinta fikraddan isaga oo ballan qaaday in ay ka wasaarad ahaan si aad u xeel dheer ugala shaqayn doonaan qayb muhiim ahna ka qaadan doonto sidii loo waafajin lahaa siyaasadda heer qaran ee dhallinyarada Somaliland oo dhawaan golayaasha sharci dejintu ansixin doonaan.
“Wax kasta oo aad halkan ka soo saartaan waxaad waafajisaan xeererka iyo dastuurka dalka u yaalla, agaasimayaasha wasaaradduna way idinla shaqayn doonaan afarta maalmood ee aad maskaxda tuujinaysaan”. ayuu yidhi wasiirka wasaaradda dhallinyarada, ciyaaraha iyo dhaqanku.
Dhinaca kale waxa shirkan hadalo qiimo badan oo dardaaran iyo dhiirri gelin ah ka soo jeediyay Xamse Khayre oo ka socday hay’adda Terri Solidali oo ah hay’adda SONYO ka caawinaysa hir gelinta qorshe hawleedkan. Sidoo kale waxa isna madasha ka hadlay Cabdinaasir Cawad Muuse oo ah madaxa xidhiidhka dadweynaha ee shirkadda SOMTEL oo qayb muhiim ah ka qaadatay taageerada hir gelinta shirkan.
Shir hawleedkan lagu diyaarinayo qorshaha shanta sanadood ee soo socda waxa ka qayb galaya in ka badan 50 xubnood oo ka kala socda ururada dhallinyarada Somaliland ee dhammaanba lixda gobol ee waaweyn ee dalka, iyada oo ay xusid mudan tahay in ay shirkan noqonayo mid ay ka qayb galayaan dhallinyaro xul ah oo ka kala socda dhammaan gobolada iyo degmooyinka dalka. Waxa kale oo shirkan ka qayb galaya dhallinyaro ka socday jaamacadaha dalka ee weyn. Mudada shirkani socdo waxa lagu dajin doonaa qorshayaasha shanta sano ee soo socda lagu hawl gali doono ee dhallinyarada Somaliland lagu horu marin doono.
Previous PostJaho-Wareer Hadheeyey Shirkii Taleex Kadib Dilka Hal Qof Iyo 11 Dhaawac Ah Iyo Qaar Ka Mid Ah Garaadada Dhulbahante Oo Shirka Ka Baxay Next PostShirkadda SOMTEL Iyo Doorkeeda Wax Qabad Ee Dhiirri Gelinta Dhallinyarada Somaliland